Muraly eny an-dalambe izay mitazona ny kolontsain'ny fiarahamonina velona | Famoronana an-tserasera
Clinton Bopp dia mpanakanto mitazona ny fomban'ny kolotsaina ny vondrom-piarahamoniny amin'ny fanatonana azy amin'ny rindrina samihafa amin'ny tanàna toa an'i Los Angeles. Ireo sary hosodoko ireo no afaka mitahiry fomba amam-panao amin'ny fiarahamonina Afrikana Amerikanina na Latino.
Hatramin'ny 2013, maro ny arabe manohana an'io fomban-drazana io ary afaka ny ho toerana hametrahana azy mitsidika fahatsiarovan-tena sy zavatra niainan'ny olombelona hafa. Bopp dia iray amin'ireo mpanakanto mitazona io hetsika io ho velona tokoa izay ahitana ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonina iray amin'ny graffiti sy rindrina.
Mpanakanto an-dalambe, hafa amin'ny iray hafa, que dia mifototra amin'ny famirapiratan'ny lokony ary izany dia manatanteraka fa ny tandindon'ny vondrom-piarahamonina samihafa dia miara-miaina am-pilaminana nefa tsy mifanitsakitsaka.
Bopp dia manambatra fahaiza-manao isan-karazany ny fahafahany miresaka ary mitantara tantara, toa an'io loko lehibe rehetra io, izay manohana ny sangan'asa kanto an-tanàn-dehibe. Miezaka hatrany izy mandefa hafatra amin'ireo sary hosodoko tsirairay niasany teny amin'ny araben'i Los Angeles.
Hevitra mamorona hatramin'ny fahazazany Tsy nijanona tamin'ny fanaovana sary sy famoronana aho. Fihetsiketsehana tsy tapaka izay hifandraisany sy novolavolainy hanatsarana, ary koa ny famelana azy hilaza izay rehetra nandalo tao an-tsainy.
Mpanakanto avy any Nouvelle Zélande ary nitondra ny kolontsainy niaraka taminy izy handoko amin'ny rindrin'ny East Los Angeles. Mural amin'ny hetsika mitohy sy ny fanovana izay sarotra ny mamela lova maharitra mandrakizay. Zavakanto mitohy mifandraika amin'ny fanovana tsy tapaka.
Una tanàna izay isehoan'ny kolontsaina isan-karazany ary ireo olona mahay mampiseho ny tsara indrindra amin'ireo "tontolo" niaviany ireo. Ny iray amin'ireo eritreritr'i Bopp dia ny hoe rehefa mandoko hoso-doko ny olona iray dia zava-dehibe ny mieritreritra ny vondrom-piarahamonina izay «hosodokoina».
Avelanay ianao ny tranokalanao ary ny azy Instagram ho anao hanaraka azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny rindrina nataon'i Bopp dia eny an-dalambe mba hitahirizana ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonina iray
Biby goavambe Brana